Nyaahụ, enwetara m email site n'aka onye na-agụ akwụkwọ, Mike, onye jụrụ ihe kpatara m ga-eji tinye foto na blọọgụ m nke na-egosi m dị ka ntutu isi gbara ọchịchịrị, dabara adaba ma belata mgbe - n'eziokwu - m na-acha awọ ma buru oke ibu. N’ụzọ dị ịtụnanya, eserese ị hụrụ na blọgụ m bụ ihe dịka afọ 5 gara aga. Enweela m kilogram ole na ole, ntutu m na-achakwa ntụ, mana ọ bụ m nọ ebe ahụ.
Na m banyere peeji nke, ị ga - ahụ foto m na - ezute Seth Godin. Foto dị na isi m nwere m n'otu uwe ahụ nke m yi na Seth na foto a. Ọ bụ uwe m masịrị m ma m ka na-eyi ya. Enwetụbeghị m ya, mana achọpụtara m na afọ m na-adabere na eriri m karịa ka ọ dịla.
N’ọnwa gara aga, a kpaliri m ịhapụ kilogram ole na ole ma tụda 10 pound. N'ihe niile na-eme ihe n'eziokwu, enwere m ike ịkwụsị ife 100. O doro m anya na m buru oke ibu - ihe si na-ebi ndụ na-enweghị mgbatị ahụ na oke nri.
Ka o sina dị, email Mike tụrụ m ụjọ mana enwere m mmetụta ịzaghachi ya. Ebumnuche nke foto m na isi m abụghị ịchọta foto kachasị egwu m nwere ike ịchọta ma tinye ya ebe ahụ iji mee ka ndị mmadụ ụjọ. Ọ bụ foto na-amasị m. A bụ m, n'eziokwu, a pụrụ ịmata m na foto a (ọ bụghị nke ahụ ogologo oge gara aga) na ndị mmadụ na-abịakwute m oge niile iji mee ka m mara na ha gụrụ blọgụ m.
Have hụtụla Pamela Anderson na-enweghị etemeete? Onwere onye gbagoro Pamela wee gwa ya na ọ ‘ghaara’ ndị mmadụ maka na ọ dị mma karịa iji paụnd etemeete? Ọ bụghị n'ezie! Na naanị nkà ya is iji mara mma.
Ọrụ m abụghị ịbụ nwoke ma ọ bụ onye omee. Ọrụ m bụ ịrụ ọrụ n'ime ahịa na teknụzụ ma soro ndị na-agụ blọgụ m kerịta ozi ahụ. Ọ bụrụ n ’ị chere na m na-eme onye ọ bụla nsogbu ma ọ bụ bụrụ onye na-anaghị eme ihe n’eziokwu site n’iji ọmarịcha ụlọ ọrụ mara mma nke onwe m wee tinye ya na isi m… nweta ndụ.
Mike, ị ga-abụ otu nwoke na-eziga ya hamburger azụ n'ihi na ọ dịghị ka azụmahịa. You deela Tom Cruise ka o mee ka ọ mata na ọ ga-adị mkpụmkpụ ka ọ dị na fim ya? Oge ọzọ ị na-ekpebi ịkpọtụrụ m site na m na kọntaktị ụdị, nwoke elu na-eji ezigbo adreesị ozi-e. Edere m adreesị ozi-e ị gafere m wee daa.
PS: Anaghị m eyi ihe ọ bụla etemeete na foto isi. 🙂